Imidlalo Engcono Kakhulu Ye-Wii Okufanele Uyidlale ngo-2020 - Ukudlala
INintendo Wii iyikhonsoli yesimanje yokudlala ekhaya eyakhishwa ngo-2006. Ngosizo lobuchwepheshe obungenazintambo, iletha ulwazi olungokoqobo kubo bonke abasebenzisi bayo. Ngo-2009, i-Wii yephule irekhodi lase-United States ngokuthengiswa kakhulu kwamakhonsoli ngenyanga eyodwa.
I-Wii iyakwazi ukunikeza ukuncintisana okunzima ku-Sony PlayStation 3 naku-Microsoft Xbox 360 ngenxa yamasu ayo wokumaketha. Lezi zinto ezimbili zenze i-Wii ilungele wonke umndeni, yingakho i-Wii ingumholi embonini ye-console. Ikhonsoli ye-Wii ngomunye wemishini yemidlalo etholwe kahle kakhulu emlandweni wanamuhla.
Uhlu lwemidlalo eyi-10 ephezulu ye-Wii - Edume kakhulu
Isizathu sokuthandwa kwe-Wii yintengo yayo ephansi, izilawuli ezifinyelelekayo, kanye ne-cornucopia yangempela yemidlalo. I-Wii ime ngokweqiniso uma kukhulunywa ngegama layo lekhodi'Inguquko.'Uhambo lwayo embonini ye-console alukho ngaphansi kwenguquko. Imidlalo engcono kakhulu ye-Wii igcwele izinkumbulo futhi inikeza ulwazi oluningi olunothile kubadlali bamageyimu.
Ake sibheke eminye yemidlalo engcono kakhulu ye-Wii nezici zayo ezihlukile, okwenza kube ngcono kakhulu.
Ufuna ukwazi okwengeziwe ngemidlalo? Bheka ngezansi
1.I-Super Mario Galaxy 2
ISuper Mario Galaxy 2 iyigeyimu yeplatifomu ka-2010 eyenziwe yiNintendo ezosetshenziselwa iWii.Kungumdlalo olandelayo womdlalo okhishwe ngo-2007. ISuper Mario ingenye yemidlalo ethandwa kakhulu yikhonsoli ye-Wii.
Iyatholakala naku-Wii yasekuqaleni naku-Wii U futhi. Ungabona imiphumela engaguquguquki ngawo womabili amadivayisi. Kukonke kuyinto emnandi nabangani nomndeni. Indaba izungeza uMario nabasolwa abajwayelekile. Kwenzeka esikhaleni futhi kunikeze into entsha endaweni yonke kaMario.
Izici ezihamba phambili:
Izinhlamvu zemali zinenani elingaphezulu.
2. Inganekwane kaZelda: I-Skyward Sword
IThe Legend of Zelda yakhishwa ngasekupheleni kuka-2011. Yavumela ukubukwa okuhle kakhulu ohlelweni njengoba kwakubonisa isitayela sobuciko obucabangayo. Iphinde yabonisa ukusetshenziswa ngobuciko kwe-Wii MotionPlus ukufakazela ukuthi ukulawulwa kokunyakaza kwakungeyona into ehlekisayo. Kungumdlalo we-16 ochungechungeni lweLegend of Zelda.
Umdlalo ukalwe phezulu phakathi kwabasebenzisi beNintendo Wii.Ungawuthola umdlalo kumadivayisi we-Wii U futhi. Ungumdlalo wekhonsoli ophelele wabalandeli bochungechunge.
Ukungezwa kwe-Umshini WeDashvele ukwenze kwamamatheka nje.
IyangezaI-Crimson Loftwingwenze lo mdlalo wathandwa kakhulu phakathi kwabasebenzisi bawo.
Imidwebo Emangazayo Nemangalisayo.
3. Isono nokujeziswa: Olandela inkanyezi
Kwakukhona isikhathi lapho i-Wii yayingaboni umdlalo ofanele we-Star Fox. Lo mdlalo wethulwe, futhi ngenxa yokudlalwa kwawo okuhle, futhi wagcwalisa ngempumelelo isikhala. Kungumdlalo wakudala wesitimela wesitimela otholakala kuwo wonke amapulatifomu e-Wii. Kungomunye wemidlalo engcono kakhulu ye-Wii etholakala emakethe.
Uma une-Wii endala elele futhi ungazami lokhu okudala, khona-ke sincoma kakhulu ukuthenga. Kuyindlela elandelayo yomdlalo wakudala weNintendo 64. Ihluzo ezithuthukisiwe kukhonsoli entsha ye-Wii zenza konke kube mnandi ngokwengeziwe.
ukuhamba okwandisiweokuza nohlelo olulawulwayo olusha kwenza izinto zibe lula.
Umdlalo unezinyathelo ezisheshayo, ezijabulisayo ezingapheli.
Uma ufisa ngokungathi sína ukukhipha i-Iron Mike ngasekupheleni kweminyaka yama-80s, ubunenketho eyodwa esele nawe:Ukushaya Punch-Out kukaMike Tyson !!Kuluhlu oludumile olwalutholakala kuNintendo Entertainment System. Idivayisi yoqobo yayidlangile emuva osukwini.
Umdlalo ofanayo usuyatholakala naku-Wii. Ukugqwayiza nemidwebo mikhulu. Abasebenzisi bangalindela imiphumela emihle ngalokhu kuthenga. Uma uthanda ukulwa nemidlalo, khona-ke umdlalo wePunch-Out ungowakho.Lo mdlalo we-Wii ubuyisa isigqi se-dodge ne-punchy esenza i-original ibe yinto yakudala.
Lo mdlalo uchaze imithetho yenhlangano yomhlaba wesibhakela sevidiyo.
Yize lo mdlalo ubutholakala iminyaka emithathu nje kuphela, ubusengumthengisi ophezulu we-NES.
UDoc Louis uphindela iLittle Mec kepha unikeza ne-Nintendo lip service futhi.
5. Indlu Yabafileyo: Overkill
Indlu yabafileyo uchungechunge olwakhiwe oluzungeze i-‘On-rails’ umqondo womdlalo wokudubula. Lo mdlalo ulawula ngokuzenzakalela ikhamera nokunyakaza, okwenza umdlali agxile futhi agxile ekudubuleni. Kuyisipina sendlu edumile yochungechunge olufile.
Yayitholakala kuwo wonke ama-consoles ngaleso sikhathi. Ifaka i-Wii njengefomethi esekelwayo yokusebenzisa kwakho.Kuyinto umdlalo othandwayo oza nokufunwa okukhulu. Kungakuhle uma ungayizama namuhla ngenxa yendaba emnandi nemidwebo enamandla.
Kuyinto umdlalo wokuqala futhi eyingqayizivele zenzelwe umuntu omdala izilaleli
Izibalo ezinemininingwane ekugcineni kwazo zonke izigaba zandisa umncintiswano
6. Indaba Yomgede
Indaba yomgede ikuhambisa lapho ungenakho ukuzikhumbula ukuthi ungubani noma uvelaphi emphakathini. Uvuka ngaphakathi emhumeni omnyama bese uzithola usedolobhaneni elibizwa ngokuthi iMimiga.
Umsebenzi wakho uba ukusindisa abantu bendawo yaseMimiga. Iplatifomu ye-2D, okuwumdlalo wegciwane ngaphakathi komphakathi we-Wii. AmaGamers ayakuthanda lokhu ngenxa yokufana kwawo nezakudala ezifana neCastlevania ne-Amaya.
Abadlali bathola ithuba lokuxhumana nezinto eziningana ukuqedela amazinga abo.
Izikhali eziqoqiwe zithuthukiselwa emazingeni ama-3.
7. Intambo Epic YaseKirby
Lo mdlalo omnandi wanikeza i-Nintendo franchise ukwakheka okusha okusha, okwakudumile ngokushesha phakathi kwabadlali. I-protagonist yomdlalo - uKirby, yakhelwe ngobuciko enezici eziningana nemidwebo emihle kakhulu.
UKirby angaxhumana nazo zonke izinto zemvelo emdlalweni futhi akhiphe imicu emholela ekutholeni izifunda ezifihliwe. Kunento esolisayo njengoba kuvezwa izimfihlo eziningi njengoba umdlalo uqhubeka.
Lo mdlalo wakhelwe kuphela izethameli ezisencane. Inamazinga obunzima afanele.
Kulinganiselwa ububanzi besikhathi esizayo semidlalo ye-Wii:
Esifundweni esedlule samasonto ayisithupha esibanjelwe ekhaya leSASCO Senior Citizens. Imiphumela ikhombisile ukuthi ukudlala imidlalo ye-Wii kube nomthelela omuhle enhlalakahleni yabantu abadala, ngokungafani nemiphumela edalwe eminye imidlalo yevidiyo ekhona namuhla. Imidlalo ye-Wii isiza ekwehliseni izinkinga zokukhuluphala ngokwenza amageyimu evidiyo ahlanganyele kanye nokuzivocavoca umzimba. Izilawuli eziphethwe ngesandla nazo ziyasiza ekusebenzeni kwemisipha. Lezi zinzuzo zikhombisa ukuthi i-Wii inesilinganiso esibanzi ngokuzayo.
Kungaba yinselele ukuthola imidlalo engcono kakhulu ye-Wii ngo-2020. Kulesi siqondisi, sibheka ezinye zezinketho ezihlukile ezitholakalayo. Sithemba ukuthi ungaba nesikhathi esihle sokudlala nabangani bakho futhi ujabulele lezi zihloko ezithokozisayo.
bukela i-movie yakamuva ye-english online
Ngingalithenga kuphi ibhokisi le-android
indlela yokubuka i-tv mahhala
isiphi isiza esihle kakhulu sokubuka ama-movie wamahhala
qhathanisa i-youtube tv ne-hulu bukhoma
ungangeza kanjani isaphulelo sabafundi ukuze ubone i-akhawunti
kuzwakala kunesaphulelo sabafundi